संगीत कहिल्यै नसकिने उकाली हो | SouryaOnline
संगीत कहिल्यै नसकिने उकाली हो
सौर्य अनलाइन २०६९ फागुन २१ गते ०:०३ मा प्रकाशित
तपाईंको बुझाइमा संगीत के हो ?
मानिसको मन र मस्तिष्कलाई आनन्दित तुल्याइरहने कर्णप्रिय ध्वनी अथवा तरंग नै मेरो बुझाइमा संगीत हो ।
तपाईंले पहिलोचोटि सुनेको गीत कुन हो ?
कान्छा रे कान्छा रे बोलको गीत । यो गीत मेरो बुबाले धेरै गुनगुनाउने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँको मुखबाट यो गीत सुनेको धेरैपछि मात्र थाहा भयो । यो गीत हिन्दी रहेछ भनेर †
आफ्नै जीवनसित मेल खाने कुनै गीत छ ?
जीवनका अनेकौँ आयाम छन्, यस अर्थमा भन्ने हो भने पनि कुनै न कुनै गीत जीवनमा कहीँ न कहीँ मेल खान्छ नै । गायिका प्रकृति गिरीको स्वर र मेरो शब्दमा रहेको गीत जीवन यस्तो कहानी हो, बुझी कहिले नसकिने, जीवन यस्तो उकाली हो चढी कहिले नसकिने जीवनसँग मेलखाने गीत हुन् । यस गीतले मेरो सांगीतिक संर्घषलाई बोकेको छ । मलाई लाग्छ संगीत यस्तो उकाली हो कहिल्यै चढेर नसकिने ।
तपाईंलाई धेरै मनपर्ने गीत पनि होलान् नि ?
जीवनसँग नजिक भएर लेखेका सबै गीत मन पर्छन् । उल्लेख गर्नुपर्दा ईश्वर बल्लभको रचना र स्वरसम्राट नारायण गोपालको स्वर रहेको मेरो बेहोसी बोलको गीत धेरै मनपर्छ । यस गीतको शब्द संगीत र स्वर सबै मोहक छन् ।
साहित्यिक क्षेत्रमा आउनुको कारणचाहिँ ?
म जन्मेको गाउँघर पारिवारिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणले मभित्र साहित्य प्रतिको अनुराग हुर्कायो । यसका कारणले यो क्षेत्रमा लागि परेको छु ।
अहिलेसम्म कति गीत लेख्नुभयो होला ?
भजन र गजल विधाभन्दा अन्य सबै प्रकारका गीत लेख्ने प्रयास गरेको छु । संख्यामा भन्ने हो भने करिब चार सयको हाराहारीमा छन् । तर, एल्बम्का रूपमा ल्याउन पाएको छैन ।
मनपर्ने गीतकार, संगीतकार र गायक पनि होलान् नि ?
आफूभन्दा पुराना अथवा अघिल्लो पुस्ताका गीतकार, संगीतकार तथा गायक/गायिका उस्तै मनपर्छ । जसमध्ये अमरसिंह गिरीका गीत, संगीतकार अम्बर गुरुङ र गायक नारायण गोपाल बढी नै मनपर्छ । उहाँहरू यो क्षेत्रका मेरा गुरु हुन् ।
आफूले लेखेका मध्ये चित्त बुझेका र नबुझेका केही गीत पनि छन् कि ?
सन्तान र सिर्जना उस्तै लाग्छ । यी सबैको क्षमता, गुण र अवगुण फरक होला । आपैँmले सिर्जना गरेका मध्ये जीवन यस्तो कहानी हो चित्त बुझ्दो गीत हो भने नबुझ्दो एपी शेर्पाले गाउनु भएको सम्झना नै आज भोलि बोलको गीत । यो गीतको शब्दलाई अझ चुस्त पारेको भए राम्रै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
तपाईंलाई राम्रो लागेको म्युजिक भिडियो ?
जीवन यस्तो कहानी हो बोलको गीतमा बनेको म्युजिक भिडियो । यसमा प्रसन्न पौडेलको निर्देशन रहेको छ ।
तपाईं को जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ ?
मेरो तुलना कोहीसँग गर्न मिल्दैन ।
सांगीतिक क्षेत्रबाट अलग्गिनु पर्‍यो भने ?
यसमा लागेको दुई दशक भयो । यसैमा अनेकाँ उतारचढावहरू भोगेको छु । ती बिर्सन चाहेर पनि बिर्सन सक्दिनँ । किनभने यस क्षेत्रमा मेरो ठूलो लगानी छ ।